अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितको ध’माधम मृ’त्यु, स्वास्थ्य मन्त्रालय चि’न्तित – Ramailo Sandesh
अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितको ध’माधम मृ’त्यु, स्वास्थ्य मन्त्रालय चि’न्तित
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरसँगै नेपालका बिरामीलाई उपलब्ध गराइएको औ’षधोपचार प’द्धतिले काम नगरेको स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य वि’पद् व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ।
हाल अस्पताल पुगेका बिरामीलाई पहिलो लहरमा प्रयोग गरिएका औ’षधि तथा उपचार पद्धतिहरू रे’मडिसिभिर, प्ला’ज्मा थे’रापी, अक्सिजन थे’रापी कुनै पनि उपायले नि’को पा’र्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको स्वास्थ्य आ’पत्कालीन केन्द्रका संयोजक तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीले बताए।
अस्पतालमा भर्ना भएपछि बि’रामीलाई उपचारले निको नभई ध’माधम मृ’त्यु भइरहेको स्थितिले केन्द्र तथा मन्त्रालयलाई चि’न्तित बनाएको उनले बताए। उनले शनिबार साँझ कुरा गर्दै भने, ‘अस्पताल भर्ना भएर के गर्नु ? कुनै औ’षधोपचार नै छैन, ग’म्भीर लक्षण देखिएकाहरूलाई ब’चाउनै मु’स्किल छ।’
अहिले पनि ग’म्भीर लक्षण देखिएर आ’इसियु र भे’न्टिलेटरमा पुगेकाहरूलाई सामान्य अवस्थामा फ’र्काउने कुरा अ’सामान्य बनिसकेको उनले बताए। ‘ग’म्भीर लक्षण लिएर पुगेकाहरूलाई नि’को पार्ने कुरा सामान्य छैन,’ उनले भने। अस्पतालमा भर्ना भएका बि’रामी नि’को हुने अवधि ल’म्बिँदै गएको सशस्त्र प्रहरी बल बलम्बुका को’भिड उपचार संयोजक डा. प्रवीण नेपालले बताए।
‘१०दिनदेखि यता हवात्तै आएका बिरामीको छिटो नि’को हुन सकेको छैन,’ उनले भने। उनले अस्पतालमा ग’म्भीर बि’रामीको संख्या ब’ढेको कारण पुगेका जति सबैले राम्रो उपचार पाउने स्थिति नरहेको बताए। ‘धेरै संक्रमित हुनु भनेको ग’म्भीर बि’रामीको संख्या ब’ढ्नु पनि हो, ग’म्भीर हुनु भनेको मृ’त्यु संख्या बढ्नु पनि हो,’ उनले भने।
उपचारकै क्रममा मृ’त्यु हुनेमा सबैजसो मि’र्गौला, कलेजा तथा क्या’न्सरजस्ता दी’र्घरो’गका बि’रामी रहेको टिचिङ अस्पतालका को’भिड उपचार संयोजक डा. सन्तकुमार दासले भने। दासले अहिल्यै औ’षधिले काम गरेको या नगरेको विषय भनिहाल्न नमिल्ने बताए। पहिलो लहरको कोरोनाभन्दा दोस्रो लहरको पुरै फरक भएकाले संक्रमणबाट बच्न आ’म ना’गरिक, सबै सरकारी निकायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको आ’देश क’डाइपूर्वक पालना गर्न अधिकारीको अनुरोध छ।
उपचारमा पुगेका कोरोना संक्रमितहरू जो युवा उमेरका छन्, उनीहरूको आँखैअघि ध’माधम मृ’त्यु भएको दृश्यले स्वास्थ्यकर्मीहरूसमेत दुः’खी बनिरहेको उनले बताए। ‘न नागरिकले कोरोनालाई ग’म्भीर रूपमा लिए न नेताले, कोरोना के हो भन्न बुझ्न अस्पतालमा भइरहेका मृ’त्युको दृश्य देख्नुपर्छ,’ उनले दुः’खी हुँदै भने।
सरकारले आ’देश गरेको मापदण्ड पालना गर्नेगराउने कुरामा अहिले पनि फि’तलो हुनु, सीमा ’नाका खुला हुनु, क’न्ट्याक्ट ट्रे’सिङ फि’तलो हुनुले संक्रमण भ’यावह हुने स्थि’ति देखिएको उनले आ’रोप लगाए। ‘मा’पदण्ड पा’लना गराउने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र हैन, हरेक नि’कायको हो, अहिले पनि सीमा नाका खुलै छन्, सार्वजनिक बस, स’भाजु’लुस, भो’जभ’तेरमा कमी आउन सकेको छैन,’ उनले भने।
यी सबै नि’कायलाई क’डाइपूर्वक मा’पदण्डभित्र ल्याउन सके मात्र संक्रमण रो’क्न सकिने अधिकारीको सुझाव छ। उनले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण पहिलोभन्दा ज’टिल रूपमा आएकाले लकडाउनतिर न’गई जनताको ज्यान बचा’उने स्थिति नरहेको संकेत गरे। ‘मान्छेको आर्थिक गतिविधिभन्दा जी’वन ब’चाउनु अहिलेको स्थितिको माग हो, सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भने। नागरिक न्युजमा यो खबर छ ।
हप्ताको पहिलो दिन नै घट्यो सुनको भाउ, कति ?